Maalinta: Abriil 20, 2020
Madaxweyne Erdoğan: 4 Maalmood Bandowga ayaa yimid: Waxaan qorsheyneynaa in bandow laga dhigo 23 degmo markale inta u dhexeysa 24-25-26-2020 Abril 31. Fiidnimadii 22-ka Abriil 2020, laga bilaabo 24.00 maalinta 26 Abriil [More ...]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Helikobtarkii ugu horreeyay ee T-129 ee ATAK oo loo dhiibo Agaasimaha Guud ee Amniga (TUSAŞ) ayaa la geeyay xarunta golaha. Marka loo eego macluumaadka ay heshay SavunmaSanayiST.com; Warshadaha Duulista iyo Hawada Turkiga [More ...]
Ayadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan iyo shirkii fiidiyowga, waxaa la qabtay gudiyo ka socda Isbitaalka Magaalada Istanbul ee Başakşehir iyo xaflada keenida qalabka neefsashada. Munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka caafimaadka. Fahrettin Koca ayaa hadal jeedisay. xaflada [More ...]
IETT 2 Waxay Khadka Cusub U Fureysaa Magaalada Başakşehir City Hospital
IETT 2 waxay khadad cusub u fureysaa Isbitaalka Magaalada Başakşehir, halkaas oo waaxda gurmadka degdegga ah la howlgaliyo Intaa waxaa u dheer, 8 xariiq oo gooni u ah oo tagaya meesha u dhaw isbitaalka ayaa sii wadi doonta inay shaqeeyaan. Cutubyo cusub oo cusbitaalka ah marxaladda soo socota [More ...]
ASELSAN Wadada Bartamaha Aasiya iyadoo la adeegsanayo Nidaamka Hubka Hubaysan ee Degdega ah ee SARP
Shirkadda difaaca ugu weyn ee Turkiga ASELSAN, SARP Dual Remote la ilaaliyo Nidaamka Hubka ee Central Asia (UKSS) ayaa ku guuleystay guul dhoofinta cusub. Waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ku saabsan raadinta suuqyada ay ka shaqeyso, [More ...]
Maqaallada taxanahan ah, Waxaan isku dayi doonaa inaan kuu sheego taariikhda Helicopters-ka Guud ee Ujeeddooyinka ay adeegsadeen Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga. Kaliya UH-1B / H, AB204 / 205, S-70 iyo AS-532 waxay ka koobnaan doonaan dhowr qaybood oo aysan ku jirin dhammaan helikobtarrada galaya alaabada. [More ...]
Adeegyada Antalya Nostalgia Tram Services si ku-meel-gaar ah ayaa loo joojiyey
Adeegyada Nostalji Tram, oo adeegyo gaadiid dadweyne siiya muwaadiniinta inta udhaxeysa matxafka iyo Zerdalilik, oo ay maamusho Antalya Transportation Inc., ayaa la joojiyay Isniinta, Abril 20, 2020. Bayaanka ay soo saartay Antalya Ulasim AS; Tani waa meeshii aan soo marey maalmo xasaasi ah [More ...]
IMM ee Abril 23 Munaasabado Ku Xusaya Warbaahinta Dijital ah Sanadkan
IMM waxay isu keentaa nashaadaadyo badan oo xiiseeya isla markaana ogeysiinaya, sidaa darteed 23-ka Abriil dabbaaldeg ayaa lagu qaban doonaa 100 sano oo xamaasad leh. Baadhitaannada ayaa ka bilaabmi doona ciyaarta carruurta 'Pollyanna' Abriil 21 markay tahay 14.00; [More ...]
Dowlada hoose ee magaalada Istanbul ayaa soo saartay bayaan ku saabsan eedaha loo soo jeediyey ee ku saabsan isbitaalka Başakşehir oo maanta la furay. Bayaanka IMM-da waa sidan soo socota: 1. Wadada hindisada ee cusbitaalka waxaa diyaariyey Wasaaradda Caafimaadka sanadkii 2015. 2. Shaqada dhismaha wadada [More ...]
Ka faa iideysiga bandoowga, Dowlada Hoose ee Magaalada Denizli waxay ka talaabtay isgoysyada lugeynaya iyo dib u cusbooneysiinta qadka wadada wadooyinka madhan iyo isgoysyada buundooyinka ee wadooyinka aadka loo isticmaalo ee magaalada. Gaadiidka Dawlada Hoose ee Denizli [More ...]
Sii wadidda ka-hortagga jeermiska iyo maaskarada mashiinnada ee ku-meelgaadhka ah ee Qorshaha Tallaabooyinka La-dagaallanka Corona ee Fee-ga ah, ayay Dawladda Hoose ee Magaala-weyn waxay u qaybisaa maaskaro darawalada wadayaasha, oo ay weheliso howlaha jeermis-ka-qaadista ee laga fuliyo xarumaha tagaasida iyo saldhigyada minibus-ka. Covid-19 dillaacay [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay diyaarisay barnaamij dabaaldeg ka duwan “Maalinta Qarannimada Qaranka iyo Maalinta Caruurta” ee 23ka Abriil. Ku casuunida carruurta ka timid magaalada caasimada ah, ee aan ka tagi karin guryahooda sababo la xiriira cudurka 'coronavirus', balakoonkooda Abriil 23 [More ...]
Taageerada Gaadiidka Waxaa la siiyay 3 kun 785 Xirfadlayaal daryeel caafimaad oo ku sugan Bandowga magaalada Gaziantep
Dagaalkii lagula jiray Corona Virus (COVID-19) ee Gaziantep Metropolitan Municipal, bandoow, oo lagu dhawaaqay dhammaadka usbuuca, wuxuu taageero adeeg siin jiray shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo muwaadiniinta laga soo saaray cusbitaalka. 12-kii Diseembar dalka Shiinaha [More ...]
Derevenk Viaduct wuxuu ku xirayaa Hulusi Akar Boulevard
Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ku aadan isku xirka Derevenk Viaduct iyo wadooyinka isku xirka, kuwaas oo sidoo kale keenaya gurmad weyn dhanka gaadiidka, Hulusi Akar Boulevard. Hulusi Akar Boulevard Malatya iyada oo loo marayo isku xira qiyaastii 3 kiiloomitir [More ...]
Waa maxay tillaabooyinka guriga lagu qaadi karo dagaalka ka dhanka ah coronavirus?
Tallaabooyin fudud oo lagu dabaqi karo guriga, gaar ahaan nadaafadda, ee lagula dagaallamayo coronavirus waxay noqon karaan ahmiyad weyn si loo baabi'iyo halista gudbinta cudurka. Sabri Ülker Foundation wuxuu sameeyey ra'yi dadweyne iyo macluumaad muhiim ah oo ay ka soo uruurisay hay'adaha tixraaca caalamiga ah. [More ...]
Hawlaha Wadada 3-aad ee Istanbul ayaa kusii soconaya Xawaare buuxa
runway 3. Turkey ee Istanbul Airport la shir duulista shaqada sii kasii darto. Codsiga ah in marinka saddexaad ee madaxbanaan uu diyaarka u noqdo duullimaadyada 18-ka Juun, 2020, wuxuu rasmi u yahay Agaasinka Guud ee Duulista Rayidka. [More ...]
Dayuuradaha Maraakiibta Badda ayaa Noqday Habeenkii Qarxinta Maraakiibta Waxyeeleysa Gacanka Jasiiradda
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli ma siineyso fursad ay wasaqda uga hesho Izmit Bay. Kooxaha shaqeynaya iyaga oo aan sheegin 7 maalmood 24 saac habeen iyo maalinba, waxay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah coronavirus gebi ahaanba, iyagoo kormeeraya kontaroolada Gacanka Izmit ee kuyaala xeebta dusheeda. [More ...]
Sidee coronavirus u saameyn doontaa shirkadda caymiska?
Coronavirus wuxuu saameeyey qaybo badan. In kasta oo qaybaha makhaayadaha iyo dalxiiska ay caan ku yihiin, xarumo ganacsi oo badan oo la xiriira aagaggaas ayaa sidoo kale si xun loo saameeyay. Midkood waa caymis. [More ...]
Resistance Covidien-19 sii wanaajiyo Turkey ee Against Faafa
Warbixinteedii ugu dambeysay, Daraasaadka Dhaqaalaha ee TSKB wuxuu la wadaagay cawaaqibka dhaqaale ee dillaacay COVID-19 adduunka oo dhan iyo qiimeyntooda muddada soo socota. "Covidien-19 sii wanaajiyo Turkey ee Resistance Against Aafooyinka ah" warbixinta, oo ay ku jiraan dhammaan kheyraadka maaliyadeed [More ...]
Dawladaha xubinta ka ah G20 waxay la wadaagaan waayo-aragnimadooda ku aaddan iskudhafka Kovid-19
Wasiir ku-xigeenka Caafimaadka Dr. Emine Alp Meşe ayaa ka soo qeybgashay Shirka Wasiirrada Caafimaadka G20 ee lagu qabtay shirweynaha Saudi Arabia ee kulanka fiidiyowga. Kulanka ayaa, ka qayb galay oo wakiil ka ah Wasiir Ku-xigeenka ee Turkey Oak, gaar ahaan cusub [More ...]
Taageero laga helo TUBITAK kuwa baara Baaraya Saamaynta Dhaqaale-Bulsheedka ee Covid-19
TÜBİTAK waxay ka caawin doontaa cilmibaarayaashu in ay baaraan saameynta cudurka faafa ee adduunka marka loo eego xagga bulshada iyo aadanaha iyo in la horumariyo xalalka, iyo sidoo kale dadaallada lagu horumarinayo tallaallada iyo daroogada si loola dagaallamo cudurka faafa ee adduunka 'Covid-19'. [More ...]
'CHP Special' 'Dib-u-dhigga bixinta Lacag-bixinta ee Buundooyinka iyo Wadooyinka Waaweyni inta uu Jira'
Gudoomiye ku xigeenka CHP Group Özgür Özel ayaa sheegay in dib u dhigista kirada, canshuurta, lacagta caymiska iyo bixinta amaahda lagu sameeyay nooca cusub ee cudurka coronavirus (Covid-19), iyo buundada oo la yiraahdo mashaariic iskaashi dowladeed oo gaar loo leeyahay. [More ...]
Xeerka Bacda Ka Hortaga Cudurka Shuban Biyoodka Ayaa La Daayay
Iyadoo la raacayo Sharciga No: 7244 oo ku saabsan Yaraynta Saamaynta Coronavirus (Covid-19) Faafida Dhaqaalaha iyo Nolosha Bulshada, oo ay kujirto tillaabooyin lagu yareynayo saameynta xun ee dillaaca coronavirus ee deegaanka dhaqaalaha iyo bulshada. [More ...]
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa sameysay bayaanno muhiim ah oo ku saabsan Gunnada Shaqada Gaaban. Wasiirka Selçuk wuxuu yidhi, “In kabadan 3 milyan oo caymiskeena ah, ku dhawaad ​​270 kun oo shirkadaheena ah ayaa lasiiyay Gunnooyin Shaqo Gaaban. [More ...]
Bixinta Kaashka Lacageed ee ah 2 TL oo loogu talagalay 300 Milyan 1.000 oo kun oo Guri ayaa La Bilaabmay
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa ku dhawaaqday in TL 2 lacagaha taageerada lacageed ee la siinayo 300 milyan 1.000 kun oo qoys ay maanta bilaabeen, taas oo qayb ka ah Xirmooyinka Dhaqaalaha Xasilinta Dhaqaale. Madaxweyne Recep [More ...]